नेपाली समाजमा सानो उमेरमा नै आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या साधरणतया कमै देखिन्छ। अधिकतम समय कलेजको पढाइमा नै खर्चिनु परेकाले व्यवसाय गर्ने सोच सानो उमेरमा प्राय आउनै पाउँदैन। पढाई सकेर पनि धेरैले जागिर खाने वा विदेश जाने भन्ने सोचाइ बनाइरहेको सन्दर्भमा उक्त उमेरमा व्यवसायी बन्ने जोखिम धेरै कमले मात्र लिइरहेका हुन्छन्। अन्य विकसित मुलुकहरूमा भने यसको ट्रेन्ड फरक छ। विश्वमा सानो उमेरमा नै व्यवसाय गरेर अरबपति भएका थुप्रै व्यवसायीहरू छन्। कतिपय त कलेज पढी नसक्दै भएका पनि छन्। कतिले कलेज छोडेर व्यवसाय सम्हालेका छन्। उनीहरूको यात्रा कसरी सुरु भयो? के के उतारचढाब झेलेर ती अहिलेका सफल व्यवसायी बने त? उनीहरूको जस्तै नेपालमा के के व्यवसाय सुरु गर्न सकिन्छ? आउनुहोस् यी ५ युवा अरबपतिका कुरा सुनौँ।
१. गुस्ताभ म्याग्नार विट्ज़ो
नर्वेका २४ वर्षीय गुस्ताभ माछा व्यवसायी हुन्। उनको कुल सम्पत्ति ३ अर्ब अमेरिकी डलर छ। उनीसँग ‘साल्मन’ प्रजातिको माछा उत्पादन गर्ने साल्मर ए.एस.ए कम्पनीको ५० प्रतिशत शेयर छ। गुस्ताभका पिताले यस कम्पनी सुरु गर्दा बजारमा माछा उत्पादन गर्ने अन्य कम्पनी पनि थिए। तर गुणस्तरीय माछा उत्पादन कम भएकाले उनले अन्य ३४ जना किसानहरूसँग मिलेर यस कम्पनी सुरु गरेका थिए। कम्पनी विस्तार गरे पश्चात् गुस्ताभलाई उनको पिताले कम्पनीको आधा हिस्सा दिएका हुन्। यस कम्पनीले हरेक वर्ष ७०,००० टन साल्मन बिक्री गर्छ। नेपालमा पनि जुनसुकै क्षेत्रमा गुणस्तरीय सामानहरू उत्पादन गर्ने हो भने सम्भावना धेरै छ। जस्तै काठमाडौँमा अर्ग्यानिक तरकारीको माग धेरै छ। अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गरेर धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ। कतिपय व्यवसायीले फार्महाउस खोलेर अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्न सुरु पनि गरिसकेको अवस्था छ।
२. जोन कोलिसन
आयरल्यान्डका २८ वर्षीय जोन सफ्टवेयर व्यवसायी हुन्। उनको कुल सम्पत्ति २.१ अर्ब अमेरिकी डलर छ। उनी स्ट्राईप कम्पनीका सह-संस्थापक हुन्। यो कम्पनीले इन्टरनेटको प्रयोग गरी अनलाइन पेमेन्ट गर्ने सुविधा दिन्छ। उनले यो कम्पनी सुरु गर्दा पेपल, अलिपे जस्ता अन्य ठूलाठूला कम्पनीले ठूलो सङ्ख्यामा बजार ओगटेको थियो। त्यसको बाबजुद स्ट्राईप् चलाउन सहज भएकाले यस्ले छिटै लोकप्रियता कमाउन सफल भयो। नेपालमा पनि विभिन्न पेमेन्ट र अनलाइन कम्पनीहरू खोलिएको छ। तर प्राय सबै कम्पनीको सुविधा काठमाडौँमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। यसलाई लिएर बढ्दो क्रममा रहेका अन्य सहरहरूमा जाने हो भने धेरै फाइदा लिन सकिने ठाउँ छ।
३. इभान स्पाईगल
अमेरिकाका २८ वर्षीय इभान इन्टरनेट व्यवसायी हुन्। उनी विश्व प्रसिद्ध सामाजिक सञ्जाल स्न्यापच्याटका मालिक साथै सिइओ पनि हुन्। उनको कुल सम्पत्ति २.१ अर्ब अमेरिकी डलर छ। २१ वर्षको हुँदा इभानले स्न्यापच्याटको प्रोटोटाइप (नमुना) बनाएका थिए। फेसबुक, ट्विटर जस्ता अन्य सामाजिक सञ्जालको अरबौँ प्रयोगकर्ता भएको बेला उनले यस कम्पनी खोलेका थिए। तर यसमा अन्य एप्पहरू भन्दा फरक सुविधा भएकाले प्रयोगकर्ता माझ छिटै लोकप्रिय भयो। अहिले हरेक दिन २० करोड भन्दा बढी मानिसले स्न्यापच्याट प्रयोग गर्छन्। नेपालमा पनि व्यवसाय गर्दा अरूले भन्दा फरक सुविधा दिने हो भने नयाँले पनि स्थान लिन सक्छन्। जस्तै नेपालमा म:म लगायत अन्य फास्ट फुडको लोकप्रियता बढ्दो छ। त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्ने सम्मको योजना बनाएर अगाडी जाने हो भने पक्कै पनि व्यवसाय सफल हुन्छ।
४.अलेक्जान्ड्रा एन्ड्रेसेन र क्याथारिना एन्ड्रेसेन
नर्वेका मेडिकल कम्पनीका व्यवसायी अलेक्जान्ड्रा र क्याथारिना दिदीबहिनी हुन्। यी दुवैको १.४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर सम्पत्ति छ। उनीहरूसँग फर्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको ४२ प्रतिशत शेयर छ। नेपालमा फार्मेसी लगायत अन्य स्वस्थ सुविधाको ठूलो व्यवसायीक सम्भावना छ। नेपालको कतिपय ठाउँमा सिटामोल समेत पाउन गाह्रो छ। त्यस्ता ठाउँहरूमा मेडिकलको बजार विस्तार गर्ने हो भने पर्याप्त आम्दानी गर्न सकिन्छ।
अमेरिकाकी २१ वर्षीय क्याली कस्मेटिक व्यवसायी हुन्। क्यालिले आफ्नै लगानीबाट कम्पनी स्थापना गरेर अरबपति बनेकी हुन्। मोडलिङबाट कमाएको २.५ लाख अमेरिकी डलरबाट उनले कम्पनी सुरु गरेकी थिइन्। अहिले उनको कूल सम्पत्ति १ अर्ब अमेरिकी डलर छ। सौन्दर्यप्रति महिलाको आकर्षण धेरै भएकाले यस्तो व्यवसाय छिटै फस्टाउँछ। व्यवस्थित रूपमा कस्मेटिक लगायत अन्य व्यवसाय महिलालाई लक्षित गरेर गर्ने हो भने धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ।
हामीले देख्यौँ सफल व्यवसायी हुनलाई उमेरले छेक्दैन। हामीलाई आशा छ यो लेखले तपाईँहरूलाई व्यवसायी बन्नलाई तथा भएको व्यवसायलाई अझै ठूलो बनाउँदै लैजानलाई प्रेरित गर्नेछ। व्यवसायीक सम्भावना धेरै भएको क्षेत्र पहिचान गरेर समयमा नै व्यवसाय थाल्ने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ।
स्रोत: यो लेख अमेरिकाको फोर्ब्स पत्रिकाले प्रकाशित गरेको कम उमेरमा अरबपति हुने व्यवसायीहरूको जानकारी साथै अन्य लेख पढेर तयार पारिएको हो।
सिलाइ कटाइ गरेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका ३ महिला...
देशमै बसेर केही उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने...
केही समयको लागि सामान्य टाउको दुख्दा होस्...
यो कथा, बाटामा कार्पेटको भारी बोग्दै, बेच्दै...